Ilanis EA Emahhala - Ezingcono kakhulu ze-EA Forex | Abacebisi Abachwepheshe | Ama-Robots ama-FX
IkhayaFree Forex EAsIlanis ye-EA yamahhala
Lena inguqulo yamahhala ye- Ilanis EA. The Forex robot ivula kuphela ukuthenga amathenda. Lokhu kuvumela ukuhlola ngokugcwele ukusebenza kwe-EA, izinhlelo zokuphathwa kwemali nokulawula isikhundla. Ingasetshenziselwa ukuhweba kuma-akhawunti wangempela. Kodwa ukusebenza kwenguqulo egcwele kunkulu.
The Ilanis EA Ishicilelwe "Emakethe" ngoJuni 5, 2014. Le nguqulo yamahhala ingeziwe ngesidingo esithandwayo samakhasimende ukunikeza ithuba lokuhlolwa kwangempela.
Ilanis Free kuyinto futhi Expert Advisor ukuze uthole ukuhwebelana ngokuhwebelana, ingasetshenziselwa ukuhweba kwi-Forex nezinye izimakethe, kuhlanganise nempahla, izinsimbi kanye nezimakethe zenkomba.
I-EA isebenzisa inkomba yesimanje neyinkimbinkimbi yokukhanyisa I-FourAverage yokunquma amaphuzu wokungena emakethe.
Isimiso sokulondoloza isikhundla sifana nesesithandwa esidumile se-Forex robot Ilan, usebenzisa isilinganiso. Kodwa ngokungafani ne-Ilan, i-Ilanis isebenzisa ukungena okunembile emakethe. I-robot igxila ekulawuleni isikhundla, uma intengo ingena esiqondisweni esingalindelekile. Ngenxa yalokhu, i-EA isebenzisa ukwanda okuningi okusekelwe ku-Martingale (i-ExpLot coefficient ingasethwa kuzilungiselelo, ngokuvamile kusuka ku-1.1 kuya ku-1.8).
Ukuhweba kusekelwe emcabangweni wokuthi i-80% yesikhathi lapho imakethe ishukuthela khona. Imikhuba ende ingaba yingozi ku-Advisor Advisor, kodwa ayivamile. Ezinye izenzakalo ezingavamile, njengezimpi, ukuwa kwezomnotho, njll, kungabangela izimo ezinjalo. Ulwazi mayelana nalezi zenzakalo lungatholakala kumasayithi wezindaba. Kunconywa ukuvala i-EA ezimweni ezinjalo. Uma lokhu kungaphumeleli, nge-flexible system yokuphathwa kwemali i-robot iyakwazi ukuletha isikhundla esivumelanisiwe (ngisho nalabo evulekile ngokumelene nesimo) ukuze inzuzo, inani elingase lidlulele ngokweqile elihlelwe ekuqaleni. Nakuba izingozi ziphakeme kuleli cala.
Umthetho oyinhloko lapho usebenza ne-Ilanis: Ungabi nomdlandla, ungakhulisi inkatho, sebenzisa izilungiselelo ezitholakale ngemuva kokusebenza kahle. Ungakhohlwa ukwandisa imingcele yemakethe yamanje ngezikhathi ezithile.
I-Expert Advisor ilungisiwe ukusebenza ku-EURUSD, i-M15
Umeluleki we-Ilanis Free Expert:
Isebenza nazo zonke izikhungo zokuxhumana ezisebenzisa i-MetaTrader 4 yokuhweba.
Isebenza ngokubili ngabakwa- "Angenza Kwasheshayo" kanye nabathengi be- "Market Ukwenza."
Inquma ngokuzenzakalelayo inani lamadijithali kumacaphuno futhi isebenza ngamacaphuno ananoma iyiphi inombolo yezindawo zedesimali.
Ukuphikisana nokulahlekelwa okwesikhashana kokuxhumeka noma ukuvalwa kwekhompiyutha yesikhashana. Emva kokuqala ikhompyutha, i-Expert Advisor izothatha imiyalo yayo futhi iqhubeke nokuhweba kancane.
Isebenza njalo ngama-oda ayo ngisho noma unqume ukuhweba ngesandla ngokufana.
I-Ilanis EA yamahhala - Izimo Zokuhweba
Ukuphela kwezokuhweba: I-MetaTrader 4.
Ukuphatha isikhungo: noma iyiphi indawo yokusebenzisana esekela ukusebenza ne-MetaTrader 4.
Imali yombili: noma yikuphi.
Isikhathi sesikhathi: akukho ukuvinjelwa.
Inani elincane: 0.01.
Nciphisa: 1: 100 noma ngaphezulu.
I-Ilanis Free EA - Izilungiselelo
- = UKUTHENGA IMALI = -
I-PeriodFA1 - Isikhathi senkomba ye-ezine
Isilinganiso1_1 - Isilinganiso esingu-FourA average (0 - 200)
- = UKUTHOLA UKUPHATHA IMALI =
I-ExpLot - I-multiplier yevolumu yemali ukuze uthole imiyalo eqhubekayo ochungechungeni.
I-StLot - Inani lenani le-oda lokuqala. Uma inani lihle, lisetshenziswe njengenqwaba ephelele (Isibonelo: Lot = 0.01, ukuhweba kwe-lot 0.01 kuzovulwa). Uma inani lingalungile, i-EA izovula i-0.01 lot ngayinye inani elicacisiwe kwidiphozi (Isibonelo: Lot = -100, i-$ 500 etholakalayo ku-akhawunti, ukuhweba kuzovulwa ngobukhulu bezinkampani ze-0.05).
StopIlanis - Ikhubaza ukuvula kochungechunge olusha, okwamanje kuzoqhubeka.
WindowHour_ - Ukuqala kwenkathi yokukhiya ukuvulwa kwezikhundla ezintsha (uma iWindowHour_ = 10 kanye ne-_WindowHour = 15, akukho ukuthengiswa okusha okuzovulwa esikhathini sokuphumula phakathi kwe-10: 00 ne-16: 00).
_WindowHour - Ukuphela kwenkathi yokukhiya ukuvulwa kwezikhundla ezintsha (uma iWindowHour_ = -1 kanye ne-_WindowHour = 15, akukho ukuthengiswa okusha okuzovulwa kusukela ekuqaleni kosuku kuze kube yi-16: 00).
I-TDW_TradeFalse - Amanani amahle asho usuku lwesonto lapho i-EA ingeke ivule imisebenzi (uma i-TDW_TradeFalse = 5, kungekho zikhundla ezintsha ezizovulwa ngoLwesihlanu, i-EA isazovala izikhundla).
- = UKUTHENGA IMIHLA = -
MaxSpread - Uma ukusakazwa kwamanje kukhulu kunaleli nani, ukuhweba ngeke kuvulwe.
MagicNumber - Ukuqala kobuhla bezinamba zemilingo okuhlala uMeluleki Wesazi. I-EA ithatha izinombolo ze-50.
Slippage - slippage evunyelwe.
Landa i-Free Ilanis EA